About us | University of Kalay
ပညာရပ်ကို ချစ်မြတ်နိုးပြီး၊ ဒေသအကျိုး၊ တိုင်းပြည်အကျိုးကို ဖော်ဆောင် ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်သော တကြွ်ကနိုးကြား အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သော လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကို မွေးထုတ်ပေးရန်။
To nurture good citizens with good morals, discipline and knowledge for sustainable development in the region and the nation.
၁။ အသိပညာအသစ်များကို တီထွင်ဖန်တီးပေးပြီး၊ ဘက်စုံပြည့်စုံ လွှမ်းခြုံသော ပညာရပ်ဝန်းကျင် ဖန်တီးရန်။
၂။ အသိဉာဏ်ကို အခြေတည်ကာ၊ ပညာအသိများကို မျှဝေပေးခြင်းဖြင့် မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အသိဉာဏ်ထက်မြက်ရေးကို ထောက်ကူဖြည့်ဆည်းပေးရန်။
၃။ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အကျိုးကို ဖောင်ဆောင်မည့် ဘက်စုံပညာရည်မြင့်မားကာ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဘွဲ့ရပညာရှင်များ မွေးထုတ်ပေးရန်။
၄။ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမြတ်ပြီး၊ ခေါင်းဆောင်နိုင်မှုအရည် အသွေးပြည့်ဝသော ဘွဲ့ရပညာရှင်များကို မွေးထုတ်ပေးရန်။
၅။ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဓလေ့ထုံးတမ်းများကို ထိန်းသိမ်းပြီး ယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုးများကို ထိန်းသိမ်းပေးရန်။
၆။ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းမြှင့်တင်ပေးရန်။
To build wisdom and transfer knowledge.
To produce graduates, endowed with virtue, knowledge and skills to meet international standards which are as well appropriate for Myanmar society.
Permit Students Allow 5000
Kalay College 16-2-1993
Kalay Degree College 7-7-1999
Kalay University 14-5-2003
Total Area 385 Acres
Chin State Area 308.56 Acres
Sagaing Area 76.44 Acres